Yonke iThailand Manje Evula Izivakashi Ngaphandle Kokuhlukaniswa Kokumenyezelwa Imemezela u-PM
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Thailand Izindaba Ezintsha » Yonke iThailand Manje Evula Izivakashi Ngaphandle Kokuhlukaniswa Kokumenyezelwa Imemezela u-PM
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukwakha kabusha • I-Thailand Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-TV screen ekhombisa uNdunankulu waseThailand izolo ememezela ukuvulwa kwezwe ngaphandle kokuhlukaniswa nezivakashi.
Ekusakazweni kwethelevishini ezweni lonke, uNdunankulu waseThailand uGeneral Prayut Chan-o-cha umemezele, “Manje sekuyisikhathi sokuthi sizilungiselele kancane ukuqala kabusha ezokuvakasha zomhlaba wonke. Namuhla ngifuna ukumemezela isinyathelo esisodwa esincane kodwa esibalulekile. ”
Phambilini uhulumeni wayehlele ukuvula iBangkok nezifundazwe ezimbalwa kuphela.
Isimemezelo sanamuhla siqinisekisile ukuthi izwe lonke lizovulwa kabusha.
Kusukela ngoNovemba 1, iThailand izoqala ukwamukela ukungena okungaqinisekisiwe ngendiza kulabo abaqede ukugoma kwabo.
“Emasontweni amabili ezayo, sizoqala kancane kancane sivumele abantu ukuthi bahambe ngaphandle kwezimo ezinzima. I-UK, iSingapore ne-Australia seziqala ukukhulula izimo zazo zokuhambela amazwe angaphandle kubantu bazo. Ngalolu hlobo lwenqubekela phambili, kusamele siqaphele, kepha kufanele sithuthuke ngokushesha. Ngakho-ke ngiyalele uMnyango Wezempilo Yomphakathi kusukela ngomhlaka 1 Novemba kuya phambili, ukuthi iThailand izoqala ukwamukela ukungena eThailand okungaqinisekisiwe kulabo abaqedele ukugoma bese bengena eThailand ngendiza, ”kusho uNdunankulu.
Phambilini uhulumeni wayehlele ukuvula iBangkok nezifundazwe ezimbalwa kuphela. Isimemezelo sangoMsombuluko sikhombise ukuthi ukuvulwa kabusha kuzohlanganisa zonke izingxenye zezwe.
“Uma ungena eThailand, bonke abantu kumele bakhombise ukuthi bakhululekile kwi-COVID-19, nobufakazi bemiphumela yokuhlolwa kwe-RT-PCR, okuhlolwa ngaphambi kokushiya izwe abadabuka kulo futhi okuzohlolwa i-COVID-19 futhi lapho ifika eThailand. Ngemuva kwalokho bangahamba ngokukhululeka ezindaweni ezahlukahlukene njengabantu abajwayelekile baseThai.
“Ekuqaleni, sizokwamukela izivakashi ezivela emazweni anengcuphe encane. Ukuze ukwazi hamba uye eThailand Amazwe ayi-10 azobandakanya i-UK, Singapore, Germany, China ne-United States.
"Inhloso yethu kuzokwengeza isibalo samazwe siqhubeke ngoDisemba 1, 2021, bese kuthi ngemuva kwalokho, kube ngoJanuwari 1, 2022," kusho uNdunankulu.
Kubavakashi abavela emazweni angekho ohlwini lwamazwe anobungozi obuncane, basamukelekile kepha bangabhekana nemikhawulo emikhulu kubandakanya nokuhlukaniswa.
UNdunankulu uqhubeke wathi: “NgoDisemba 1, 2021, sizocubungula ukuvumela uphuzo oludakayo ukuthi luphuzwe ezindaweni zokudlela futhi sivumele nezindawo zokungcebeleka nezokungcebeleka ukuthi zisebenze ikakhulukazi ngesikhathi sokugubha uNyaka Omusha.
“Ngiyazi ukuthi lesi sinqumo siza nobungozi obuthile. Cishe kuqinisekile ukuthi sizobona ukuphakama kwesikhashana ezimweni ezibucayi njengoba siphumula le mikhawulo.
“Angicabangi ukuthi izigidi eziningi ezincike kulo mkhakha zingakwazi ukukhokhela umonakalo omkhulu wesikhathi samaholide sonyaka omusha esilahlekile.
"Kodwa uma kungavela okungalindelekile kwaleli gciwane ezinyangeni ezizayo, iThailand izosebenza ngokufanele."
Umkhakha ubalwa ngama-20% we-GDP. Imali engenayo evela kubavakashi bakwamanye amazwe iyodwa yayingama-15% we-GDP, ngabahambi abangaba yizigidi ezingama-40 abavela phesheya, ikakhulukazi amaShayina.
IBhange LaseThailand lilinganisela ukufika kwabantu bangaphandle abangama-200,000 6 kuphela kulo nyaka lenyuka laya ezigidini eziyisithupha ngonyaka ozayo.